KCRW သည်ခေတ်မီသောရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနနှင့်မီဒီယာဌာနချုပ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » audio » KCRW သည်ခေတ်မီသောရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနနှင့်မီဒီယာဌာနချုပ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်သည်
KCRW မကြာသေးမီက Santa Monica ကောလိပ်၏အဓိကကျောင်းဝင်းရှိအဆောက်အအုံတစ်ခု၏မြေအောက်ခန်းမှဒေါ်လာ 38 သန်းရုံးချုပ်အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Santa Monica ကောလိပ်၏မီဒီယာနှင့်ဒီဇိုင်းစင်တာအသစ်။ ဤစက်ရုံအသစ်သည် KCRW ၀ န်ထမ်းများနှင့်စီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက 11 နှစ်ကြာရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ၀ န်ထမ်းများအား၎င်းတို့၏ဘူတာရုံကိုဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သို့ရောက်စေရန်အတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုတည်ဆောက်ရန်တည်ဆောက်ထားသည့်ဒေါ်လာ6ဒေါ်လာဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောရေဒီယိုနှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။
"ဒီအဆောက်အ ဦ မှာ rooftop၊ 1 master machine ခန်း၊ IDFs သုံးခု၊ 20 စတူဒီယိုနဲ့အင်တာဗျူးနေရာတွေမပါဝင်တဲ့ကေဘယ်ကြိုးသုံးထပ်ပါဝင်တယ်" commented အသံလွှင့်ဌာန၏အင်ဂျင်နီယာချုပ် Steve Herbert.
စီမံကိန်း၏အဓိကအချက်မှာ VP of Technology သည်ဖြစ်သည် Key ကို Code ကိုမီဒီယာ, အက်ဒွပ်လော့ခ်။ Ed နှင့်သူ၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည်စီမံကိန်းနယ်ပယ်ကိုကျေနပ်စေရန်အတွက်လိုအပ်သောအသံနှင့်ပုံရိပ်နှင့်မီဒီယာကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ အသံခလုတ်တစ်ခုစီ၊ ဂြိုဟ်တု transmitter, control room, server နှင့်စတူဒီယိုတို့ကိုအခန်းတစ်ခုစီတွင်လုံလောက်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများရရှိစေရန်၊ စနစ်အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန်နှင့် cable တစ်ခုစီကိုသတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုသေချာစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
“ ဒီစီမံကိန်းဟာစနစ်ပေါင်းစည်းခြင်းပါဝင်တဲ့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အသံ - ရုပ်မြင်သံကြားနည်းပညာများစွာကိုနက်နက်နဲနဲသိကျွမ်းထားတယ်။ Key Code Media သည်စိန်ခေါ်မှုအတွက်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။ Ed ကလော့ခ်မှတ်ချက်ပေးသည်။
KCRW ရေဒီယိုစခန်းသစ်အတွင်းရှိအထပ်သုံးထပ်ရှိပုံကိုဆွဲခြင်း။ ဂီတနှင့်သတင်းများအတွက်အသုံးပြုသည့်ဤကြမ်းပြင်တွင် 10၊ လေ၊ အင်တာဗျူးနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်နေရာများရှိသည်။
ရေဒီယိုစခန်းဒီဇိုင်း၊ ရန်ပုံငွေရှာခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း - 11 နှစ်၏စီမံကိန်း
KCRW ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံအသစ်အတွက်ပဏာမနည်းပညာဒီဇိုင်းကို 2012 တွင်စတင်ခဲ့ပြီး Key Code Media သည်6တွင်ဒေါ်လာ 2014 သန်းပေါင်းစည်းခြင်းစီမံကိန်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၊ 2017 နှောင်းပိုင်းအထိသာလျှင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက်ကန ဦး ကြိုးတပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ဘာရှည်လျားယူ?
KCRW စက်ရုံသည်သူတို့၏ဟောင်းနွမ်းသောအဆောက်အအုံဟောင်းတွင်ရှိနေပြီး 35 နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြောင်းရွှေ့ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ အထွေထွေကန်ထရိုက်တာများ၊ ဗိသုကာပညာရှင်များ၊ လျှပ်စစ်ပညာရှင်များနှင့်စနစ်ပေါင်းစည်းသူများကပဟေofိတစ်ခုစီကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်နိုင်အောင်တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစတွင်သိသာထင်ရှားသောပြissuesနာများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုရပ်တန့်သွားစေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေသည့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစိန်ခေါ်မှုများကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
“ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအထွေထွေကန်ထရိုက်တာအငြင်းပွားမှုမှာတောင် Key Code Media ရဲ့ Ed Locke ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိခဲ့တယ်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ၊ ထုတ်လွှင့်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုသေတ္တာတွေ၊ လျှပ်စစ်ပြွန်တွေကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ အခြားကန်ထရိုက်တာများပြုလုပ်မိသည့်အမှားအယွင်းအနည်းငယ်ရှိသည့်ဤစီမံကိန်း၏အဆင့်တိုင်း၌ကွန်ယက်၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာပရိဘောဂဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းတို့ကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်” ဟုစတိဗ်ဟားဘတ်ကမှတ်ချက်ချသည်။
နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာစီမံကိန်းနှောင့်နှေးမှုမှဖြစ်သည်။ 2014 နယ်ပယ်တွင်အစပိုင်းတွင်အသံလွှင့်သည့်နည်းပညာသည် 2017 တွင်အမှာစာစတင်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ နည်းပညာသည်လျင်မြန်စွာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည် 'နှစ်များ' တွင်တိုင်းတာမှုနောက်ကျခြင်းသည်ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
“ 60% ကိုကန ဦး ဒီဇိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောကိရိယာများကိုတပ်ဆင်သည့်အချိန်နှင့်ပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သည်။ ဤစီမံကိန်းတွင် 1,200 လိုင်းပစ္စည်းများကျော်။ ပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာတွင်သက်သေပြရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုစီပါ ၀ င်သည်။
IP (AoIP) ကျော်ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်ကို
85 + KCRW ၀ န်ထမ်းအလုပ်စင်တာများနှင့်အသံခလုတ်တစ်ခုချင်းစီသည်မျှဝေခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းအတွက်ကွန်ယက်ရှိသည်။ အဆောက်အအုံတွင် 25 စတူဒီယိုနေရာများ၊2On Air Control ခန်းများ၊3အင်တာဗျူးခန်းပြွတ်များ၊ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုထိန်းချုပ်ခန်းများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအခန်းတစ်ဒါဇင်ကျော်တို့ပါဝင်သည်။ Audio Over IP (AoIP) ကို သုံး၍ အခန်းတစ်ခန်းစီကိုဘက်စုံသုံးအာကာသအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
KCRW သတင်းထောက်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအားလုံးသည်စက်ရုံတစ်လျှောက်ရှိမည်သည့်အခန်းမှမဆိုကွန်ယက်ရှိ Pro Tools များသို့မဟုတ် Dalet စီမံကိန်းများအားချက်ချင်း ဝင်ရောက်၍ စီမံနိုင်သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အကူးအပြောင်းတစ်ခုပဲ။
“ အရင်တုန်းကတော့ငါတို့လေယဉ်ကွင်းကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိတယ်။ မင်းရဲ့ DJ မှာတေးဂီတအစီအစဉ်တစ်ခုပြီးဆုံးသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့အဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ 11 am talk show ကိုစတင်နိုင်အောင်ချက်ချင်းထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ဒီစက်ရုံအသစ်နဲ့အတူအခန်းတစ်ခန်းစီဟာတစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့လေယာဉ်စတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ”
သို့သော် AoIP တည်ဆောက်ချိန်အတွင်းပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ လွန်စွာလိုလားသော Mac workstations တွင်အလုပ်လုပ်သော Pro Tools များသည် Axia Livewire AoIP ကွန်ယက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ရှုပ်ထွေးမှုကိုထပ်လောင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့် KCRW သည်သူတို့၏အသံကွင်းဆက်တွင်ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းခြင်းအဆင့်ကိုမထည့်လိုပါ။
ဤပြconcernနာကိုဖြေရှင်းရန် Key Code Media အင်ဂျင်နီယာများသည် ProTools ကို CAT32 cable တစ်ခုတည်းမှတစ်ဆင့်6bi-direction အသံရုပ်သံလိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများကိုတပ်ဆင်ရန် Axia နှင့် Ravenna နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် KCRW အားသူတို့၏အစဉ်အလာ ProTools I / O ကိုမြဲမြံစေရုံသာမကအလုံးစုံလုပ်ငန်းခွင်စီးဆင်းမှုစွမ်းရည်များကိုလည်းတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။
ခေါင်မိုးလွှဲပြောင်း - သင်္ချာလုပ်နေတာ
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံတစ်ခုပါ။ မျက်မှောက်ခေတ် streaming များနှင့်အတူပင်ထုတ်လွှင့်သူများသည်မျက်မြင်ရ microwave ထုတ်လွှင့်စက်များကိုမှီခိုပြီးချိန်ညှိနိုင်သည် ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေး။ အဆောက်အအုံသစ်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ဂီယာပစ္စည်းကိရိယာများကိုကောင်းကင်သို့မြှောက်တင်ရန်နှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်နေရာများ၊
"ဒီ transmitter တွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေဆီကိုသွားမယ့် line-of-site ရှိဖို့လိုတယ်။ ယခင်တွက်ချက်မှုအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါ၊ မူလပုံဆွဲခြင်းထက်နှစ်ပေမြင့်သောခေါင်မိုးပေါ်ရှိအထောက်အကူပြုပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ခေါင်မိုးအမြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီးတွင် Key Code Media အဖွဲ့သည်အဆောက်အအုံဗိသုကာနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပစ္စည်းကိရိယာတိုင်းကိုမြင်ယောင်စေရန် 3D မော်ဒယ်များကိုဂရုတစိုက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အခြား rooftop hardware နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပconflictsိပက္ခများကိုရှောင်ရှားပြီးအကောင်းဆုံးအမြင့်နှင့်ထောင့်များကိုတည်ငြိမ်သော link များရရှိရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤစက်ကိရိယာများ၏အရေးကြီးသောသဘောသဘာဝနှင့်မိုးသည်းထန်စွာသောစက်ကိရိယာများကိုညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်စာသင်ချိန်တွင်သင်ကြားနေစဉ်တွင်၊ ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ပါ။
KCRW ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတွင်ဗွီဒီယိုစက်ကိရိယာများဘာလုပ်နေလဲ။ KCRW သည်တမူထူးခြားသည့်အများပြည်သူသုံးရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Morning Becomes Eclectic သည်ထင်ရှားသောဒေသခံဂီတအဖွဲ့များဖြစ်သောဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများဖြစ်သောဂျိမ်းစ်ဘလိတ်၊ Beck၊ Jungle၊ Hot Chip နှင့် Leon Bridges တို့ပါဝင်သည်။ ဂီတလုပ်မှုတစ်ခုစီကို KCRW ယူကျုရုပ်သံလိုင်းတွင်လွှင့်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသော 303K နောက်လိုက်များဖြစ်သည်။
အသံလွှင့်ရုံတင်မကအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုစီနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုပုံဖော်ခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံး setup ကို 4k- နိုင်စွမ်း Sony က switch တစ်ခုအတွက် Ross Carbonite ကအထောက်အပံ့ပေးသောဗွီဒီယိုအခန်းတစ်ခန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်စတူဒီယိုတစ်လျှောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ကင်မရာများ၊ ဂရပ်ဖစ်အတွက် Ross Expressions၊ Ross Ultrix video router ကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောလူမှုမီဒီယာသတင်းများအတွက် Ross Inception ။ ဖျော်ဖြေမှုနေရာမှဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာအားလုံးကိုaပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည် စတူဒီယို Network Solutions EVO သိုလှောင်မှုကွန်ယက်ကို၎င်းကို KCRW စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့မှ Adobe Premiere Pro သို့မဟုတ် Final Cut Pro တွင်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စတူဒီယိုနေရာတွင်ဇယားကွက်၊ ကြမ်းခင်းမီးများနှင့်စပီကာများ၊ PTZ ကင်မရာများတပ်ဆင်ထားပြီးပရိသတ်များနှင့်အလှူရှင်များထံတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများပါ ၀ င်သည်။
MBE တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲများ၏ကျောရိုးသည် Pro Tools၊ SSL C200 console၊ အသံထုတ်လွှင့်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အာဒံအသံစပီကာများနှင့် MADI နှင့် Dante အသံဖြန့်ဖြူးမှုတို့ဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောအသံထိန်းချုပ်မှုအခန်းဖြစ်သည်။ USS လုပ်ငန်းအတွက်မစ်ရှင်ထိန်းချုပ်မှုခံစားရစေရန်အခန်းအတွင်းရှိပစ္စည်းအားလုံးကိုထုံးစံအတိုင်းပရိဘောဂများဖြင့်ထုပ်သည်။
"ကျနော်တို့ကငါတို့မြေအောက်ခန်းစက်ရုံမှာအာကာသထဲကထွက်လာတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလက်မတစ်ခု On-air ထိန်းချုပ်မှုအခန်းသို့မဟုတ်စားပွဲခုံအာကာသအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံစရာနေရာမရှိ။ တည်နေရာအသစ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ဖရင့်ခန်းများစွာနှင့်စားပွဲခုံအပြင်အဆင်ရှိသည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စွမ်းရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းနိုင်စွမ်းကိုများစွာတိုးတက်စေသည်” ဟုစတိဗ်ကမှတ်ချက်ချသည်။
ကွန်ဖရင့်ခန်းတစ်ခုစီတွင်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားသော Crestron တို့ထိမျက်နှာပြင်စနစ်၊ အသံစနစ်များနှင့်မော်နီတာတစ်ခုပါရှိသည်။ KCRW အဖွဲ့သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုအဝေးမှခေါ်ဆိုရန်နှင့် zoom session မှတဆင့်၎င်းတို့၏အသံနှင့်ဖန်သားပြင်များကိုမျှဝေရန်ပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ကြားသည်။ ကွန်ဖရင့်ခန်းတစ်ခုစီသည် Crestron ကွန်ယက်တွင်ရှိနေပြီးအဆောက်အအုံအတွင်းရှိအခန်းပေါင်းများစွာကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုတည်းသို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
သော့ချက်သောကုတ်နံပါတ်စုဆောင်းခြင်း - စပြီးမှအဆုံးအထိ
ခြောက်နှစ်ဒီဇိုင်း (ပေါင်း၊ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းများ) ပြီးနောက်ရာနှင့်ချီသောအသံ - ရုပ်မြင်သံကြား၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အသံထွက်လွန်ထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်ကုန်များကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် - 120 ၀ န်ထမ်းများကိုရုံးသစ်သို့ခေါ်ဆောင်လာရန်အချိန်တန်ပါပြီ။ 120 ၀ န်ထမ်းများသည် Dalet Galaxy နှင့် ProTools ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းအသွားအလာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် hardware အသစ်များကိုလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသင်တန်းသည် KCRW အင်ဂျင်နီယာများသင်ယူရန်လိုအပ်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်တစ်ဒါဇင်ကျော်အပြင်။
Key Code Media သည် KCRW ဌာနများနှင့်ရက်သတ္တပတ်များစွာနေပြီးစက်ရုံအသစ်အတွင်းရှိကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောနေရာတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
“ ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအတွက်နည်းပညာအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ကိရိယာတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့အင်္ဂါရပ်တိုင်းကို ၀ န်ထမ်းတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Key Code Education ၏ထူးခြားချက်မှာကွင်းဆင်းလေ့ကျင့်ရေးနေ့ (များ) ပြီးနောက်၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းကိုကောက်ယူနိုင်ပြီးမေးခွန်းများကိုအချိန်မရွေးဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။ ဒါကသင်ထုတ်လုပ်သူတွေဆီကရတာမဟုတ်ဘူး” ဟုစတိဗ်မှတ်ချက်ချသည်။
KCRW SYSTEM INTEGRATION ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
Santa Monica သည် Key Code Media သို့သူတို့၏ 35 နှစ်အရွယ်မြေအောက်ခန်းမှရွှေ့ပြောင်းရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒေါ်လာ 11 သန်းစီမံကိန်းဖြစ်သော KCRW ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းရှိ NPR ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုသည်မြေအောက်ခန်းမှအသစ်တည်ဆောက်ထားသောအဆောက်အအုံများသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာစီမံကိန်း၏အတိုင်းအတာအပြည့်အ ၀ သော့ဒီဇိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထိန်းချုပ်ရေးအခန်း၊ အသံထိန်းချုပ်ခန်း၊ ADR စတူဒီယို၊ ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ စက်ရုံသုံးရုံ၊ တည်းခိုခန်း ၇ ခန်း၊ စာသင်ခန်းနှစ်ဆယ့်ရှစ်ခန်း၊ အစည်းအဝေးခန်းသုံးခန်းနှင့်ခန်းမရာပေါင်းရှစ်ဆယ်တို့ရှိသည်။ ပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ကေဘယ်လ်ကြိုး၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဒီစနစ်မျိုးစုံတပ်ဆင်ခြင်းတွင် Live, Post၊ Automation နှင့် Audio တို့တွင်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများပါ ၀ င်သည်။
IP ကိုကျော် audio လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အက်ဒွပ်လော့ခ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု ဂျိမ်း Blake က KCRW KCRW ရေဒီယို Key ကို Code ကိုမီဒီယာ MStar Ross Inception SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows စတီဗင်ဟားဘတ် သိုလှောင်ခြင်း TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-10-30
ယခင်: CTV ဗန်ကူးဗားကျွန်းရှိ Sony ၏ HXC-FB80 HD စတူဒီယိုကင်မရာများကိုယူဆောင်လာသည်
နောက်တစ်ခု: 2019 Camerimage ရှိ Panavision ၏အဆုံးမှအဆုံးသို့ဂေဟစနစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ